I-Apartment eChilly, i-jacuzzi enombono wentaba
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguMiha
Indawo epholileyo ikwindawo yoxolo eMlino, 800m/10min ukuhamba ukuya eLake Bled. I-Apartment yonke intsha, ipholile kwaye ishushu. Uya kuba nembono ekhethekileyo kwiintaba ukusuka kwigumbi lokulala kunye ne-terrace. Egadini uya kuba ne-jacuzzi yakho yokuphumla emva kosuku. Ingasetyenziswa unyaka wonke phakathi kwe-10- 22h. Ukuhlwa apha kunomlingo ngenxa yokutshona kwelanga okuhle kunye nezandi zendalo.
Indawo yethu ilungile kwizibini, izihlobo, abantu abahamba bodwa, abahambi ngezoshishino, kunye neentsapho (kunye nabantwana)
Sinikezela nge-50m2 yendlu yomgangatho wokuqala + i-25m2 i-terrace egqunyiweyo ngokujonga ezintabeni kunye neendawo zokupaka simahla phambi komnyango kwiimoto ezi-2.
I-Apartment ixhotyiswe ngefanitshala yendalo eyenziwe ngesandla.
Sinezindlu zokulala ezi-2, igumbi lokulala lokuqala lihlukaniswe nesiqingatha ukusuka kwigumbi lokuhlala elinodonga lwamatye, ngasemva lwakhiwe eWardorbe, ngaphakathi yinkosi bed 160 x 200. Igumbi lokulala lesibini ligcwele lahlulwe ngomnyango kunye ne-kingbed 160 x 200. Kwigumbi lokuhlala kukho i-sofabed 140. x 200.
Ikhitshi licocekile linefriji enkulu kunye nazo zonke izinto ozifunayo xa upheka.
Ummandla wethu unendawo yokuqubha yendalo ukusuka apho abahamba ngeenqanawa bakuthatha khona ngenqanawa yePletna yemveli ukuya kwiBled Island, ehonjiswe yicawa ephakathi kunye nentsimbi enqwenelayo. Sikwanazo iindawo zokutyela ezimbini ezidumileyo zehlabathi kwilali yaseGadini (izindlu zemithi) 500m ukusuka kwiflethi kunye neReturant yeSova 1km kude (imbono yechibi). Zombini zinemigangatho ephezulu kakhulu yomgangatho wokutya kwesiSlovenia.
Ukuba ujonge ukutya okunohlahlo lwabiwo-mali oluphantsi, ungakutya nakwiindawo zokutyela kumbindi wedolophu (5-10eu)
Sifumaneka kwifowuni kunye ne-imeyile phakathi kwe-7 - 24h.